के हो कनेक्ट आइपीएस, कसरी चलाउने ? - Drishti Khabar
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत्र ०९, २०७८ | १८:४९:३५
काठमाडौं- विश्वभर नै प्रविधिले सबै कुरा सजिलो बनाउँदै गइरहेको छ । कामहरु छिटो, सजिलो र सरल बन्दै गएका छन् । प्रविधिको यो युगमा घर–बसी बसी नै तपाईं आफ्नो धेरै कामकाज फत्ते गर्न सक्नुहुन्छ ।
यस्तै, एउटा प्रविधिको यहाँ हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौं, जसले भुक्तानी प्रणालीमा निकै सहजता ल्याइदिएको छ । नेपाल क्लियरिङ हाउसले सञ्चालनमा ल्याएको कनेक्ट आइपीएसमार्फत घरमा नै बसेर भुक्तानी गर्न सकिन्छ । आफ्नो खातामा भएको पैसा कतै तिर्नुपर्ने छ भने कनेक्ट आइपीएसले त्यो सुविधा प्रदान गर्छ ।
बैकमा गएर लामो लाइन बसेर भुक्तानी गर्नुपर्ने वाध्यता हटाएको छ कनेक्ट आइपीएसले । नेपाल सरकारले भुक्तानी र राजस्व संकलन सम्बन्धी कारोबारको पूर्ण एकीकृत र स्वचालित ई–भुक्तानीको लागि पहल गरेको थियो । सो पहल अनुसार नै सबै काम कनेक्ट आइपीएसबाट गर्न सकिन्छ ।
कर भुक्तानीको लागि कर कार्यालय वा यसको तोकिएको बैंक शाखामा नगइ नै कनेक्ट आइपीएबाट तिर्न सकिन्छ । कनेक्ट आइपीएस सञ्चालनमा आएपछि दक्षतामा सुधार, लागत घटाउने, सार्वजनिक सेवामा सुधार र वित्तीय पारदर्शिता वृद्धि भएको कम्पनीले बताएको छ । कनेक्ट आइपीएसले नेपालमा इलेक्ट्रोनिक भुक्तानीलाई समेत वृद्धि गरेको छ ।
कनेक्ट आइपीएसमार्फत धेरैवटा बैंकसँग जोडेर अन्तरबैंक पैसा स्थानान्तरण गर्न सकिने सुविधा छ । कनेक्ट आइपीएस कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिसमेत बनाएको छ ।
‘कनेक्ट आइपिएसको वेबसाइट छ । राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको सीमाभित्र रहेर कारोबार गरिरहेका छौं,’ सिइओ निलेशमान सिंह प्रधानले भने, ‘वेबसाइटबाट दस लाख र मोबाइल एप्सबाट प्रतिकारोबार एक लाखसम्म भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।’
क्लियरिङ हाउसले अहिले चेक क्लियरिङ, कनेक्ट आइपिएस, कर्पोरेट पे, नेसनल पेमेन्ट स्विच, एनएचसीएल आइपिएस गरी ५ वटा सेवा प्रत्यक्ष सञ्चालन गरिरहेको छ ।
यीमध्ये कनेक्ट आइपिएस बैंकहरूका सामान्य सदस्यहरूले अतिरिक्त सेवा लिन सक्ने प्रणाली हो ।
‘मोबाइल इन्टरनेटको माध्यमबाट सरल भुक्तानीमा पहुँच पु¥याउनु कम्पनीको उद्देश्य हो,’ कम्पनीका सिइओ प्रधानले भने, ‘सेवाग्राहीले जुनसुकै ठाउँमा बसेर सोझै खाताबाट कारोबार गर्न सक्नेछन् । तेश्रो माध्यम अपनाउनु पर्दैन ।’
सरकारले खाताबाट गरिने कामहरू डिजिटलाइज गर्ने भनिरहेको बेलामा कम्पनीले सहयोगी हुनेगरी काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । यसअनुसार पछिल्लो समय नेपाल सरकारलाई भुक्तानी, नागरिक लगानी कोषमा भुक्तानी, सेयर कारोबार, सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्नसमेत सम्भव भएको छ ।
कसरी सेवा सुरू गर्ने ?
कनेक्ट आइपिएसमार्फत् कारोबार सुरू गर्न सबैभन्दा पहिले प्रयोगकर्ताले एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ । दस लाखभन्दा बढी कारोबार रकम भए कनेक्ट आइपीएसको वेबसाइटमार्फत् जानुपर्छ ।
यदि एन्ड्रोइड फोन छ भने गुगल प्लेस्टोरमा गएर अयललभअत क्ष्एक् टाइप गर्नुहोस् । प्लेस्टोरमा यसको लोगोसहित नेपाल क्लियरिङ हाउसको कनेक्ट आइपीएस एप देखापर्छ । त्यसलाई आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुपर्छ ।
एप्पल फोन भए एपस्टोरमा गएर माथिकै तरिका अपनाएर एप डाउनलोड गर्न सकिन्छ ।
एपमा आफ्नो साधारण विवरण भरेर लग–इन आइडी र पासवर्ड बनाउन सकिन्छ । त्यसपछि प्रयोगकर्ताले सञ्चालन गरिरहेको कुनै पनि दुईभन्दा बढी बैंकलाई एपबाट नै भेरिफाइ गर्न सक्नेछन् ।
वेवसाइटमा कसरी दर्ता हुने ?
दस लाखभन्दा बढीको कारोबारका लागि कनेक्ट आइपीएसको वेवसाइटमा जानुपर्छ । वेवसाइटको माथिल्लो दायाँ कुनामा ‘साइन इन’ र ‘साइन अप’ भन्ने विकल्प हुन्छ । साइन इन कनेक्ट आइपीएसमा पहिल्यै जोडिएकाहरूका लागि हो जहाँ लग–इन आइडी र पासवर्ड हाल्नुपर्छ ।
नयाँ प्रयोगकर्ताले साइन–अपमा क्लीक गरेपछि एउटा फारम खुल्छ । त्यसमा नाम, इमेल, ठेगाना, मोबाइल नम्बर लगायत विवरण हुन्छन् । त्यो भरिसकेपछि तल लग–इन गर्ने नाम र पासवर्ड हाल्नुपर्छ ।
यति गरेपछि पेज खुल्छ । त्यसमा आफ्नो बैंकको विवरण भर्ने ठाउँ हुन्छ । यी सबै विवरण भरिसकेपछि बैंकले सकेसम्म छिटो स्वीकृत गर्छ । भेरिफाइ गर्न बैंक नै पुगिराख्नु पर्दैन । अधिकांश बैंकको घरैमा बसेर अनलाइन भेरिफाइ गर्न सकिन्छ । त्यसपछि कारोबार सुरू गर्न सकिन्छ।
कुन–कुन बैंक र वित्तीय संस्था छन् ?
अन्य डिजिटल भुक्तानीका माध्यमभन्दा कसरी फरक छ ?
कनेक्ट आइपीएस प्रणाली अन्य डिजिटल भुक्तानीका माध्यमभन्दा यस अर्थमा फरक छ कि, यसमा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था लिंक भएका छन् । त्यस्तै आइपिएस माध्यमको प्रयोग गर्दा छुट्टै डिजिटल वालेटमा पैसा भर्नु पर्दैन । सोझै प्रयोगकर्ताको खाताबाट काटिन्छ । खातामा पैसा हुँदासम्म समस्या आउँदैन ।
साथै कतिपय डिजिटल भुक्तानी माध्यममा वित्तीय संस्थाहरूको लिमिट कनेक्सन हुन सक्छ । यसमा कनेक्सन समस्या नभएको सिइओ प्रधानले बताए ।
‘कनेक्ट आइपिएसमा ८ वटा डिजिटल वालेट जोडिएका छन् । यी सबैबाट सबैमा सरल कारोबार गर्न सकिन्छ,’ प्रधानले भने ।
यति मात्र होइन, कोही ग्राहकको वालेटमा पैसा छ र त्यसलाई बैंकमा सारेर नगद निकाल्नुप¥यो भने पनि सम्भव भएको प्रधान बताउँछन् ।
‘वालेटहरूमा रकम लोड–अनलोड गर्न आइपिएसले सहयोग गर्छ । यो सुविधा कन्टेक्ट आइपिएसमा मात्रै उपलब्ध छ,’ उनले भने, ‘पठाएको पैसा तुरुन्तै पाउन सकिन्छ । कुनै पनि काम गर्न बैंकमा लाइन बस्नु, भौचर भर्नु आवश्यक छैन ।’
यसमा सानादेखि ठूलासम्मका कारोबार गर्न सकिन्छ । विशेषगरी ठूला कारोबारमा यो प्रणाली उपयोगी सावित भइरहेको कम्पनीको भनाइ छ ।